Iikhamera eziPhezulu ezi-10 ezifihlakeleyo ze-SPY zeMonitor Maid / Umncedisi wasekhaya | Izisombululo ze-OMG
Iikhamera eziphezulu ezifihlakeleyo ze-10 ezifihlakeleyo ze-SPY ze-Monitor Maid / Umncedisi wasekhaya
Ngenxa yendlela eqhubayo yama-Maids kunye nabancedisi basekhaya emakhaya. Siyibonile imiba enje ngoomakazi abaxhaphaza abantwana, ukubondla ngokutya okungafanelekanga, kubandakanya nobusela nabanye. Kungoko isidingo sendawo yokuhlala kunye neyamashishini eenkqubo zeCCTV ziphezulu kunangaphambili. Ibalulekile into yokuba sigcine iitsheki ezithile kunye nokulinganisa. Phakathi kweendlela ezininzi ezizezinye, eyona ndlela inokubhetele kukuba neekhamera zeCCTV kumakhaya ethu. Nangona kunjalo, umbuzo uphakama luhlobo luni lwekhamera yeCCTV elungele wena ukuqaphela izinto ezifana nohlahlo-lwabiwo mali, amanqaku, kunye nokusetyenziswa lula.
Ikhamera ye-OMG Super Night WIFI Ikhamera yetshaja ye-USB (I-SPY306)
Ngotshintsho kwi-Era yale mihla, wonke umntu ufuna ukuba neendlela eziphucukileyo zokujongana neemeko. Kwaye yeyiphi enye into enokubukeka ngakumbi kunekhamera yokhuseleko lwakho malunga nobungakanani btshaja onokuyisebenzisa nangamaxesha ebusuku ngobuninzi bepesenti yamathuba okukhathazeka? Ewe, i-SPY306 Camera iza kunye nobukhulu obunobunkunkqele kunye nobuchule obulula. Uyilo lwayo olucekeceke luyenza ifaneleke kwindawo ethile kwaye igcina ingabonakali ngexesha elinye. Yintoni egqithisile? Ikwanemodi yokujonga ebusuku ebusuku! Ukuqinisekisa ukuba ulele ngoxolo olupheleleyo !. Inokuhlawuliswa ngayo nayiphi na itshaja yesiqhelo ye-USB esiyisebenzisa kwiiselfowuni ezingasokuze uyisebenzise nangaliphi na ixesha, naphina.
Ikhamera ye-OMG WIFI yeClock (I-SPY297)
Yintoni ikhamera yokhuseleko xa ingakwazi ukudibanisa kunye nokusingqongileyo? Inokubonelela kuphela ngenqanaba lokuphamba lokhuselo ukuba umntu ongena ngaphakathi okanye umntu onazo naziphi na iinjongo zokwenza ingozi kwipropathi yakho okanye abantwana akaboni apho ikhoyo. Kwiindawo ezinjalo, i-SPY297 yenza umsebenzi wayo. Inobungakanani besithethi serediyo esenza ukuba ingabonakali. Iyasebenza kwaye igcinwe kulawulo kusetyenziswa inkqubo ye-WIFI eyenza ukuba iqhubeke isebenza kwaye iqinisekisa ukuba yonke idatha yakho iyavunyelaniswa, kungekuphela nje oko kodwa ikwafaka neefayile ezirekhodiweyo kunye nomhla kunye nexesha ebeziveliswe ngalo okanye ezirekhodwe ngalo. Iza nezinye izinto ezintle zokuzonwabisa onokuzisebenzisa ukonwaba ngalo mzuzu ngokuziva ukhuselekile ngokupheleleyo njengeBluetooth: ukuze ukwazi ukudlala umculo kuyo kwaye ugcine ukungabinakho kude, kunye nerediyo eyakhiwe: ukuze ukwazi ukudlala izitishi ezahlukeneyo kwizikhululo ezahlukeneyo Nawuphi na amabala kwaye ugcine umsitho ukhanyisiwe !. Ngamazwi amafutshane, le yipakethi yokuzihlaziya edityaniswe nokhuseleko xa kufanelekileyo !.
Ikhamera yeendlela ye-OMG 4K WIFI Router (SPY296)
I-Wifi ixhaphake kakhulu kule ndlu kwezi ntsuku, yenye yezo zinto zinengqondo eziyinxalenye ebalulekileyo yayo nayiphi na indawo nokuba yindawo yokuhlala, iofisi, okanye nayiphina indawo yethutyana. Nangona kunjalo, ngaba ubusazi ukuba nokuba yi-WIFI ejongeka ngendlela eqhelekileyo inokukubonelela ngokhuseleko njengolunye uhlobo? Kulungile, nge-SPY296. Ungayonwabela i-WIFI engamisi ngelixa uziva ukhuselekile ngaxeshanye kwaye wazi konke okujikelezileyo. Ingarekhoda iividiyo ukuya kuthi ga kwisigqibo se-4K sokukunika loo mda uphambili owufunayo ekuqinisekiseni ukuba yonke into ihlala iphantsi kolawulo lwakho ngelixa ibengekho emehlweni akhe wonke umntu okwindawo. Inokulawulwa sisibini isixhobo se-android kunye ne-IOS ye-smartphone ukuze ishiye iluncedo kuye nawuphi na umntu oqhelekileyo ukuyifumanisa ngokulula. Inayo nekhadi le-SD slot yogcino olongezelelweyo olunokwandiswa ukuya kwi-128 Gb eqinisekisa ukuba unokwanela nje ukufumana naluphi na uhlobo lwedatha ofuna ukurekhodwa ngalo. Uyilo lwendlela ye-wifi ye-wifi iyenza ibe yinto engathandekiyo. Yibeke nje nakweyiphi na indawo yegumbi lakho, eofisini, okanye kwindawo kawonke wonke kwaye ube nembono egcweleyo ngalo lonke umcimbi ngaphandle komzamo!
I-OMG WIFI I-Bluetooth Isithethi se-SPY Efihliweyo Ikhamera (SPY263)
Umculo yinxalenye ebalulekileyo yobomi banamhlanje. Abantu bayayimamela emsebenzini, xa benxunguphele ekhaya, kwizihlandlo ezikhethekileyo nakwimisitho. Umculo osemoyeni naphina kule Era yale mihla. Nokuba ngabakwishumi elivisayo okanye abantu abadala, wonke umntu unokuzikhethela oko. Abadlali bomculo, izipikha zeBluetooth ziziswe zibuyele ngexesha kwaye zikwinqanaba lokuthengiswa kwalo kule mihla kuba ungazisebenzisa nangaliphi na ixesha ngokunxibelelana ngefowuni okanye ngeelaptop ukuze udlale umculo wakho owuthandayo. Nangona kwangaxeshanye, into eqhelekileyo njengale inokusetyenziswa ngokugqibeleleyo ngeenjongo zokhuseleko kwaye kulapho i-SPY263 isenza ukungena kwayo. Sisidlali somculo esixhunyiwe kwiBluetooth esinokusetyenziswa njengekhamera yokhuseleko ngaxeshanye ngelixa singasasazi isibini esinye ukuze sizonwabise. Inokurekhoda ukuya kwiividiyo ze-4k zesigqibo sokuqinisekisa ukuba unomgangatho ogqibeleleyo wokurekhodwa kwakho, kunye nokukunika amava omculo omangalisayo ngenkqubo yomculo weDoblas Atmos ejikeleze inkqubo. Le yenye yeendlela ezikhuselekileyo zokuzonwabisa wena, amalungu osapho lwakho okanye amaqabane akho eofisi.
Ikhamera ye-OMG HD 1080P yeCylinder Security Wi-Fi (SPY204)
I-Wifi, njengoko benditshilo ngaphambili, iyinxalenye yobomi bemihla ngemihla kubomi babantu kwezi ntsuku kwaye ingasetyenziselwa ukhuseleko olufanelekileyo ngaxeshanye. Nangona i-SPY204 iyithatha kwelinye inqanaba ngale khamera ye-Cylinder Security yeWIFI ejikelezayo eza nesixa seempawu! Makhe sithethe ngekhamera yakhe kuqala eyindlela ejikelezayo ye-1080p yokurekhoda evumela umsebenzisi ukuba abeke le ndawo kwindawo ayifunayo kwaye ayifumane yonke imbonakalo ye-360 kuyo ngaphandle kokukhathazeka. Iza kunye nebhetri ye-5000mah enkulu kakhulu kwikhamera ngokuqinisekileyo ukuyinika ixesha elide lokuhlala lisebenze kuneekhamera eziqhelekileyo. Iza nezinto ezimbalwa ezithandekayo zokukuvumela ukuba ube nolwazi olungakumbi malunga nokusingqongileyo njengokulinganisa ubushushu okanye isixhobo somswakama esenziwe ngaphakathi. Ngamafutshane, le khamera ifana nokujikeleza i-flying drive. Unokude ubukele iividiyo zayo ziphila ngendlela ezinokuhamba ngayo iiyure kunye neeyure rhoqo ngaphandle kwekhefu ngenxa yobukhulu bayo bebhetri., Icompact yokusetyenziswa kokubini nakweyiphi na indawo nokuba yeyorhwebo, iofisi, okanye ikhaya !.
Ikhamera yetshaja ye-OMG WIFI (SPY165)
Ngazo zonke iintetho ezimalunga nokhuseleko ngeWiFi kwiimveliso ezichazwe apha ngasentla. Siyenzile icace gca into yokuba ungazifumana njani ukuba unenqanaba elikhulu lokhuseleko ngelixa usebenzisa i-WIFI njengoko usenza kwisiseko esiqhelekileyo, kodwa kuthekani ukuba bendikuxelele ukuba kukho nendlela efihlakeleyo ngakumbi yendlela onokuthi ungabeke iliso kuye wonke umntu ufuna ngaphakathi kwegumbi okanye kuyo nayiphi na indawo oyifunayo? Kungenxa yoko le nto i-SPY165 idume kakhulu, endaweni yokhuseleko lwakho i-WI-FI ikhusela itshaja yayo ukuba ikunike loo msantsa mncinci ngelixa ujonga imeko ekujikelezileyo. Inokurekhoda kwiziseko ezahlukeneyo zomgangatho njenge-1080p, i-640p okanye eye-240p ngokomnqweno womntu, kungekuphela nje koko kodwa inokwenza nomsebenzi wayo njenge-wifi charger ngokufanelekileyo ngokuqinisekisa ukuba awuphulukani nehla elinye le-WIFI , uqinisekisa umgangatho wevidiyo yakho kwi-WIFI kunye namanqanaba okhuseleko zombini ahlala emangele! Olu lukhetho oluhle kakhulu lokufumana i-angle ekuboneni okuphakathi ukuze ujonge ngakumbi izinto ngelixa ukonwabela izinto zobomi bemihla ngemihla ngexesha elinye.
I-OMG efihliweyo yeNcwadi yeKhamera (SPY004)
Ukuba ungumntu ohlala ejikelezwe ziifayile ezininzi kuyo yonke indawo eofisini yakhe, okanye usebenza kwithala leencwadi apho ufuna ukuqinisekisa khona ukhuseleko ngaphandle kokuba abantu bakhutyekiswe yimfihlo yabo iphazanyiswa kune-SPY004 kuphela kwento oyifunayo . Ngoku kuya kufuneka uzibuze ukuba yintoni ekhethekileyo ngale khamera eyenza ukuba yahluke kwaye ingabonakali? Luyilo olucekeceke kuyo kunye nokubonakalisa okubonakalayo kwezixhobo ezivumela ukuba ihlale icocekile nayiphi na incwadi nakweyiphi na indawo, ngelixa ikunika umbono wecala ngalinye kwikona nganye ngaphandle kokukhathazeka kwishishini lakho okanye iofisi eqhuba incoko yabucala. . Iza kunye nebhetri ye-10,000 mah esokuba yeyona yomeleleyo phakathi kwazo zonke izixhobo esizithethile apha ngasentla, ikunika ixesha elingakumbi lokurekhoda nokugcina ikhamera isebenza ngokukhuselekileyo kwaye ingcono, kodwa ayisiyiyo yonke le nto incinci gajethi apha. Iza kunye netekhnoloji yokujonga ebusuku engakhanyisi kwaye iqinisekisa eyona yeyona vidiyo ilungileyo xa ikhamera isebenza ebusuku!, Imisebenzi emininzi yokusebenzisa izinto ezahlukeneyo, ikhadi le-SD lixhaswe ukuya kwi128 GB kunye nokurekhodwa kwendlela yokurekhoda ezinye zokukhawuleza ngaphandle kwesiqu! Yiyo yonke le nto ungacela ukhuseleko lwakho xa kuziwa ekuphatheni !.
I-OMG 4K WIFI Power Bank Camera (SPY175)
Ingxaki yamandla ibe ngumcimbi ePakistan kwaye amanye amazwe amaninzi kutsha nje ngoku ukuphuma kombane kugqitha ngaphaya kwemihla, kwaye ngelaxesha elinjalo ii-mobiles kunye neelaptops ziye zanzima kakhulu ukulawulwa njengenkqubo ye-Android ehambisa njengokutsha kwamanzi . Kwiimeko ezinjalo abantu badla ngokubhekisa kwii-Powerbanks zokugcina iifowuni zabo ziphila nokuba akukho mbane wamandla ujikelezileyo okanye umbane ucinyiwe. Zibaluleke kakhulu kwaye zidibene ungazihambisa naphi na nangaliphi na ixesha ukugcina ifowuni yakho iphila kwaye ungaphoswa nakweyiphi ii-imeyile okanye umnxeba obalulekileyo. Kodwa, kuya kwenzeka ntoni ukuba unokuba naloo Powerbanks luguqulwe lube ngumthombo wamandla wokhuseleko lwakho? I-SPY175 ime ngeli xesha. Inekhamera yesisombululo se-HD 4k kuyo eqinisekisa umgangatho ongaphambukiyo womgangatho ngexesha elinye ngelixa ungaphazamisi nomsebenzi wakho nokuba! Yinto egqibeleleyo enokuhlangana kunye nokusingqongileyo kunye nokuhle ngaphandle kokuvumela abantu ukuba bazi ukuba yintoni kanye kanye. Igqibelele izisongelo zoMaids kunye nendlela abaxhaphaza ngayo abantwana bakho kwezi ntsuku. Yifaka nje kwaye uyiyeke ukutshaja ukuze ikugcine iliso lakho ngelixa usenza izinto zakho kulo naliphi na igumbi lendlu! Inezinto ezithile ezimangalisayo kuyo kunye nekhamera yokubamba eshukumayo ukubona nasiphi na isoyikiso xa izula-zula kwindawo oyibeka kuyo, umbono omangalisayo wobusuku ebusuku ukuze izinto ziqaqambe ngamanye amaxesha xa kungekho kukhanya ngaphandle, nangona yonke le nto ayinakusebenza ngaphandle kokuba ibhetri elungileyo ke le CCTV incinci iza nebhetri ye-10,000 mah igcwele kwaye ixhotywe ukugcina wonke umntu ephantsi kweliso lekhamera yakhe ngalo lonke ixesha !.
I-OMG Mini ye-WIFI engenantambo ye-Spyera efihliweyo Ikhamera yePinhole (SPY032)
Ngelixa uthetha ngokhuseleko kunye neekhamera, kwaye malunga nendlela onokubakhupheka ngayo emehlweni abantu ukuze uqiniseke ukuba yonke into ihlala ifihlakele kwaye abayiboni ngokwenene into eyenzekayo okanye ukuba uneso kubo, asinakulibala malunga ikhamera ye-pinhole siyakwazi! Olunye kuphela lwekhamera onokulufumana kulo naliphi na ihempe lakho, ijini, umzimba, kunye nejethi akukho mntu uya kukwazi ukuyibona. Eli gosa lincinci kwingubo yakho linokugcwala ibhetri ngokwaneleyo ukuze igcinwe isebenza kwaye irekhoda ngaphezulu kweeyure ze-70 ezithe tye! Kuyaphambana indlela ezincinci ngayo izinto ezinokuhlanganisa amandla angaka, kodwa ayisiyiyo le nto iLil enayo kuphela. Iza kunye nekhamera ye-1080p yokufumanisa intshukumo eqinisekisa ukuba isenzo ngasinye esenziwayo kwimeko yayo siyaphawuleka kwaye sibhalwe ngokuchanekileyo ukuze siqiniseke ukuba nganye ikona iphantsi kolawulo lwakho xa uyinxibile, uyilo olubambekayo luyenza ingabonakali ngokoqobo kuye nawuphina umntu onayo phambi kwayo ekunika ithuba lokuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana bakho, amalungu osapho, okanye abantu osebenza nabo eofisini kwaye ujonge abantu abafuna ukonakalisa ipropathi yakho, abantwana, okanye wena. Ilawulwa yi-WIFI eyenza ukuba ukujongana kwayo kunye nokuseta kakhulu ngaphambili kulawulwe nokuba ukude nayo. Ke ukuba ufuna ukubonakala classy ngelixa uqinisekisa ukuba yonke into ihlala iphantsi kweliso lakho, le yinto ekuwe!
Ikhamera ye-OMG WIFI I-Bluetooth Somlomo Ikhamera (SPY208)
I-SPY208 ikunika enye inketho yokuzionwabisa ngelixa uqinisekisa ukuba akukho mntu uzimisele ukwenza intshukumo ekrokrisayo kuwe okanye kwindawo okuyo yokwenzakalisa nabani na okanye nantoni na, njengoko uyilo oluhle alunakuze luvumele ukuba luvele emehlweni akhe nabani na. Ewe kulungile, i-SPY208 yikhamera edibeneyo ye-wifi edityaniswa nesithethi somculo weBluetooth ukuze ikwazi ukuzonwabisa, ngelixa ukhuseleko kokubini luphezulu kakhulu. Ungayibeka naphi na ngokwenyani okanye nokuba uyinike abantwana bakho ngelixa badlala ukuze uqiniseke ukuba uneliso kubo ukugcina yonke into iqinisekile kwaye inqanaba labo lokuqinisekisa lihlala limi phezulu. Iza kunye nekhamera yokurekhoda ye-HD eqinisekisa ukuba ingaphuli iiphikseli kodwa ibuye iqinisekise ukophula iinjongo zabo bacinga ukuba banokungena ngokungekho mthethweni kwipropathi yakho nayiphi na injongo embi okanye isenzo esibi. Le nto ixhasa ikhadi le-SD ukuya kuthi ga kwi-128 GB yokuqinisekisa ukuba unendawo yokugcina efunekayo ukonwabela umculo wakho kunye neevidiyo ozirekhoda kunye ne-cam yakho. Yindlela emangalisa eneneni yokuba zonke ii-engile zigutyungelwe nangona zingakhathalelwanga ngokupheleleyo kuba inkwenkwe embi izakugcina yonke into iphantsi kweliso layo lekhamera!
4614 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje